खानेपानी योजनामा मर्मत सम्भार कोष किन ? (भिडियो सहित) – WASHKhabar
खानेपानी योजनामा मर्मत सम्भार कोष किन ? (भिडियो सहित)
३० चैत्र २०७६, आईतवार १३:३२ 362 पटक हेरिएको
उदयपुर : केही समय अघि उदयपुरको बेलका नगरपालिका–५ मा सञ्चालित डाँडागाउँ खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको इन्टेक सार्नुपर्ने भयो । इन्टेक सार्नका लागि रकमको स्रोतको खोजी हुन थाल्यो । कसैले वडा कार्यालयमा निवेदन हाल्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याए, कतिले सोझै नगरपालिका गुहार्ने र कसैको भनसुन चाल्छ भने त्यो पनि गर्ने कुरा भयो । कतिले भने अरुलाई गुहारेर बस्दा लामो समय लाग्ने भएकाले आन्तरिक कोष नै परिचालन गरौं भन्ने विचार प्रकट गरे । अन्ततः मर्मत सम्भार कोषमा लामो समयदेखि बचत गरिराखेको रकम मौज्दात थियो र सोही रकम इन्टेक सार्न खर्च गर्ने निर्णय भयो । बैठककै निर्णय अनुसार मर्मत सम्भार कोषको रकमबाट आवश्यक स्रोत सामग्री जुटाईयो र केही समयभित्रै फत्ते भयो ।
डाँडागाउँ खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका अध्यक्ष तीर्थराज अधिकारी मर्मत सम्भार कोष बिनाको खानेपानी आयोजना सम्झिँदा पनि अत्यास लाग्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘इन्टेक सार्नका लागि कसलाई गुहारेर हिड्ने ? माग्नेले त मागुँला, दिनेले दिन्छ नै भन्ने पनि छैन । कतिलाई मागेर हिड्ने ? दिनेले पनि उसको अनुकुलता हेरेर पो दिन्छन् त ? कति समयसम्म पर्खिने ?’
त्यसैले उहाँको बिचारमा खानेपानी योजनाको दिगोपनाका लागि मर्मत सम्भार कोष नभई हुँदैन । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘मर्मत सम्भार कोष छ, खानेपानी योजना छ, मर्मत सम्भार कोष छैन, खानेपानी योजना पनि रहँदैन ।’
१४७ घरलाई खानेपानी वितरण गर्दै आएको डाँडागाउँ खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाले मासिक संकलन गर्ने खानेपानी महसुलबाट मर्मत सम्भार कार्यकर्ताको तलब छुट्याएर बाँकी रकम कोषमै जम्मा गर्दै आएको छ । दुई जना मर्मत सम्भार कार्यकर्ता राख्दा मर्मत सम्भार कोषमा न्यून रकम जम्मा हुने भएकाले एक जना कटौती गरी एक जना मर्मत सम्भार कार्यकर्ता मात्र राख्ने बिषयमा पनि उपभोक्ता समितिमा छलफल भईरहेको अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो ।
खानेपानी आयोजना सञ्चालनका क्रममा साना तिना समस्या आईरहन्छन् । घरी पाइप फुट्ने, घरी पाइप भित्र केही बिकार गएर अड्किने, कहिले टुटी विग्रने र कहिले साना तिना पहिरोले पाइप बगाउने र फटाहाले काटिदिने समस्या पनि आउन सक्छ । तर खानेपानी आयोजनाको कोषमा रकम अभावका कारण सानो भन्दा सानो काम पनि अरुको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउँछ । सानो रकमले पनि सुचारु हुन सक्ने खानेपानी आयोजना कसैको सहयोग नपाएमा त्यत्तिकै अवरुद्ध हुने अवस्था आउँछ ।
देशभरिका कतिपय खानेपानी आयोजनाहरुको हालत यस्तै छ । कतिपय व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन भएपनि कतिपय खानेपानी आयोजनाहरु भने सामान्य स्रोत साधनको अभावमै अवरुद्ध भएर बसेका छन् ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन परियोजनाले सन् २०१४ मा गरेको एक अध्ययनले हालसम्म निर्मित खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना मध्ये २५.४ प्रतिशत खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना मात्र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन भएका छन् । यस्तै ३६ प्रतिशत आयोजनाहरु सामान्य मर्मत पछि चल्ने अवस्थाका छन् भने ९.२ आयोजनाहरु जटिल प्रकारको मर्मतको आवश्यकता रहेको देखिएको छ । १९.८ प्रतिशत खानेपानी आयोजनाहरु पूनर्निर्माण नै गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् ।
यसर्थ नयाँ निर्माण हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा मर्मत सम्भार कोषको अनिवार्य व्यवस्था गर्न सक्यौं भने सामान्य मर्मत सम्भारकै अभावमा खानेपानी आयोजना नै अवरुद्ध हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन कि ?
#मर्मत सम्भार कोष
महिलामैत्री शौचालय बनाउन यसो
खानेपानी पाइपलाइन तोडफोड गरेको
महिलामैत्री शौचालय बनाउन यसो गर्नुहोस्
रेडियो कार्यक्रम पानी, सरसफाइ र जीवन, अंक – ८